HOR DHAC: Germany Vs. Slovakia – Gool FM
(Lille Métropole) 26 Juunyo 2016. Germany waxa ay isha ku hayaan in ay sameeyaan wixii ay dhigtay Spain afar sano kahro iyada oo koobkii aduunka ee ay ruxday 2010 daba dhigtay Euro 2012.
Dhinaca Low oo ah horyaalka aduunka ayaa haysta fursada ceynkaas ah, sidoo kale, France oo tartanka marti-galineysaa ay sidaas sameeysay 2000 maadama ay 1998 ku guuleysatay koobkii dunida ee ay iyadu marti galisay.
Hase ahaatee, waxa ay fooda 16-ka ku darayaan Slovakia oo bishii hore dhagaha ka soo karbaashtay kulan saaxiibtinimo.
– Jogi Low waxa uu ku adkeysan karaa isla safkii ku soo bilowday guushii 1-0 ahayd ee ay ka gaareen Waqooyiga Ireland.
-Germany waxa ay sida daadka ugu di’I lahaayeen goolka hadii uusan ahayn gool Michael McGovern bandhig wanaagsan la soo baxay.
-Taas waxa ay ka dhigan tahay in Joshua Kimmich uu dambeedka middig ku soo bilowdo halka Mario Gomez-na uu ka sii dheelo afka hore.
– Jérôme Boateng waxaa la filayaa in uu ka soo kabsado dhaawac yar oo uu qabay.
– Ján Kozák waxa uu la soo shir tagi karaa shaxdii ahayd 4-5-1 ee bar bar dhaca o-o la galay England.
-Yeelkeede, is badal kale lama filayo oo dhinaca Slovakia ah.
MA LA SOCTAA?
-Germany waxa ay badisay 7 ka mida 10-kiii kulan ee ay is arken Slovakia (Saddex guul daro), guul daradoodii ugu dambeeysay waxa ay ku dhamaatay 3-1 oo at Slovakia bishii hore ciyaar saaxiibtinimo uga badisay.
-Germany wey badisay 13 ka mida 16-kii kulan ee ugu dambeeyey tartamada waa weyn, laba bar bar dhac ayey galeen midna waa laga garaacay.
-Dhinaca Joachim Low waxa ay kubadda haysteen 71.9% kulankoodii ugu horeeya, waa cadada ugu badan Euro-ga iminka socda.
-Slovakia kaliya hal ciyaar ayey shabaqa ilaashadeen toddobadii kulan ee ugu dambeeyey tartaamda waa weyn, waxa ayna ahayd dheeshii ugu dambeeysay ee ay England la ciyaareen.
Kaar jaale ah ayey u jiraan in ay kulanka kan xiga seegaan: Boateng, Khedira, Özil
Kaar jaale ah ayey u jiraan in ay kulanka kan xiga seegaan: Durica, Hrošovský, Kucka, Mak, Pecovský, Škrtel, Weiss
Gegida:De Pierre Mauroy